Public Health in Myanmar: Hyperthyroidism & Medicine
Theint Mar Lwin said...
After having several tests my Dr. confirmed me that i have Hyperthyroidism.However, according to Thyroid function test was normal, so he said I do not required any medication. But I have something on my lip (ကီုးကန်းပစပ်). Any cream that I should apply or do the test again for further medication. Please advice. Thanks in advance
ကျွန်မလည်း သိုင်းရွက်ဖြစ်နေပါသည်ရှင့်။ နှလုံးခုန်မြန်တဲ့အတွက် နောက်ဆို နှလုံးရောဂါ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသလားရှင်။ ကလေးလည်းရှိနေတာကြောင့် ဂါမာနဲ့လည်း မထိချင်ပါရှင့်။ ခွဲစိတ်တာလည်း မလုပ်ချင်ဘဲ ဆေးကို မှန်မှန် သောက်ပီး ထိန်းသွားချင်ပါတယ်ရှင့်။ ပုံမှန်ပြသင့်တဲ့ ဆရာကို လမ်းညွှန်ပေးပါရှင့်။